event – Hargeysa Cultural Centre
Xirfadda Fagaare-Ka-Hadalka iyo Aqoonteeda
Cabsida iyo kalsoonidarrada ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ka hor istaaga qofka in uu dad soo hor istaago. Haddii labadaa lala tacaalo, waxa kordha isla markaana awood yeesha dhiirranaanta qofka ee fagaare-ka-hadalka. Marka laga tago sida loo kala aftahansan yahay marka hore, haddana fagaare-ka-hadalku waa xirfad ka bilaabanta kalsoonida, Haddaba sidee ayaa […]
Buugta Carruurta: Kaalintooda Barbaarinnimo
Bulsho toosinteedu waxay ka bilaabantaa barbaarinta dhallaanka iyo carruurta soo koraysa. Xilkaas qaayaha weyn leh, dadyow kala duwan iyo hay’ado dawladeed ayaa ka wada qayb qaata. Hooyada ayaa u horreysa, dugsiyada xannaanada iyo waxbarashada ayaa ka mid ah. Intaas waxa soo raaca aqoonyahanka Soomaalida ee dejiya buugta carruurta barbaarintooda loogu talogalay. Barnaamijkani wuxuu iftiiminayaa kaalinta buugta […]
Heesta “HOOYOY LA’AANTAA” ee Hadraawi
Falanqaynta iyo doodwadaagga maansada “HOOYOY LA’AANTAA” ee M.I.W. Hadraawi curiyey waxay ku saabsan tahay kaalinta baaxadda weyn ee hooyadu ka qaadato jiritaanka iyo horumarka bulshadeenna. Siyaalo kala duwan ayay dooddani u kala qeexaysaa qaybaha kaalinta hooyadu u kala baxaan, laga soo bilaabo ubadkorinta ilaa bulshodhiska. Waxa si waafi ah looga hadlayaa sida diinteenna Islaamku u […]
Maalinta Fayadhawrka Caadada ee Caalamiga ah
Maalinta Fayadhawrka Caadada ee Caalamiga ah “Ma aha ceeb, ma aha cudur. In aad heshaa waa caafimaad. Ha uga habsaamin waxbarashaada/shaqadaada, yayna dhantaalin kalsoonidaada.” ”Aynu burburinno derbiga lagama-hadlaannimada bulsho ee caadada haweenka!”
Riwaayadda “Aan Dhawrno Dhaqankeennii Wacnaa”
Iskaashatada Farshaxanka ee Dabahuwan
Bandhigga farshaxan. Hargaha iyo saamuhu waxa ay nolosha Soomaalida kaga jiraan kaalin aan ilbaxnimada iyo magaaladu u buuxin karin, ilaa haddana siyaabo kala duwan ayaa loo isticmaalaa. Bandhiggan farshaxanka laga sameeyey hargaha, waxa soo bandhigi doona ururka iskaashatada ee la yidhaa “Dabahuwan”.
Bandhigga Buugga “Aqoon Baa Aroostay Qabyaalad”
Abwaan Maxamed Aw Cismaan Maxabe “Maxamed-Dheere” kolkii uu dhammaystay dugsigii sare ee Faarax Oomaar, waxa uu ku soo baxay barmaamijkii Heesaha Hirgalay oo lagu qabtay Beerta Xorriyadda, Hargeysa, 1975, isla markiibana ku biirey kooxdii Janaraal Daa’uud ee Xoogga Dalka, isagoo horeba uga tirsanaa ciidammada. Riwaayadihii uu ka qayb galay ee jilaaga iyo heesaaga ka ahaa […]
Bandhigga Buugga “Nitaaqo Jacayl”
“AAFO REEB” & “SAMIR WEEYE HANASHADU”